ဒိန်ချဉ်တို့ကမ္ဘာ Yoghurt Land မှာ ဒိန်ချဉ်ဘူဖေးအဝစားကြမယ်
လစာလေးကလည်းထုတ်ပြီးချိန်၊ လက်ထဲမှာကလည်း ငွေယားလေးများရှိနေချိန်ဆို မျက်လုံးက ဘာမြင်မြင်ကို နှုတ်ခမ်းကတောင့်တလာတော့တာမဟုတ်ပေဘူးလား ဘော်ဒါတို့ရေ။ ၂၃,၂၄ ကြပ်တည်းချိန်တွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မယိုင်မလဲ တောင့်ခံထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆုလာဘ်အဖြစ် ခုလိုလစာရပြီးချိန်လေးတွေကျရင် မနက်စာဆိုလည်း ကောင်းပေ့လေးမှ၊ နေ့လည်စာလေးကလည်း မြိန်လိုက်ရမှ၊ စားပြီးချိန်လည်း ဒီပါးစပ်ကအငြိမ်မနေအချိုလေးတည်းလိုက်ရမှ ခံတွင်းကလည်း ရှင်းတော့တယ်ဆိုသကိုး။ စားပြီးသောက်ပြီးချိန်လေးတွေများ ရေခဲမုန့်လေး ဒိန်ချဉ်လေးတွေနဲ့ အချိုတည်းဖို့ဆိုတာကလည်း လျှာရင်းကိုစိမ့်နေစေမယ့် အိုင်ဒီယာလေးမဟုတ်လား?
ဆိုတော့ကာ ဥတုပူပူ နွေထူထူမှာ ပူလောင် အိုက်စက်အစားမပျက်ရစေဖို့ လမ်းကြုံဝင်စား၊ Shopping သွားတိုင်း အဆင်ပြေလို့ အရသာရှိရှိ စားလို့ရမယ့် ကိုယ်ကြွေခဲ့ရာ ဒိန်ချဉ်ကမ္ဘာလေးကို မနှေးမမြန် သတင်းပြန်ပါးလိုက်ပြီနော် ဘော်ဘော်တို့။
ဒီဆိုင်လေးက မြန်မာပလာဇာ တတိယထပ်အလယ်မှာရှိတာ။ ဆိုင်လေးက ခုံလေး ၃,၄ ခုံလောက်နဲ့ ခေတ္တခနအနားယူရင်း စားသောက်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့ပုံစံလေးပါ။ သူ့ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးရော၊ ခွက်လေးတွေ၊ အသီးအနှံလေးတွေအားလုံး ရောင်စုံချစ်စရာလေး ခင်းကျင်းထားတာများ ကောင်မလေးတွေတော်တော်သဘောကျကြမှာ အသေချာ။
တော်တော်မိုက်တဲ့အချက်က ဒိန်ချဉ်ကို ဘူဖေးစားသလိုပဲ။ ကြိုက်သလောက်စား ကျသလောက်ရှင်းရတာမျိုးတဲ့။ အဆန်းပဲနော်။ သူလည်း ရန်ကုန်မှာ အပြည့်ဖွင့်နေတဲ့ Hot Pot ဆိုင်တွေကို အားကျလို့နဲ့တူပါ့။ သူ့နည်းနိသာယနဲ့ ဘယ်လိုလေးများ ဘူဖေးစားရပါ့ဆို???
ပထမဆုံး ရောင်စုံချစ်စရာ ခွက်လှလှလေး ကောက်ယူလိုက်မယ်။ ပြီးရင် ရေခဲမုန့်စက်လိုမျိုး သဘာဝဒိန်ချဉ်၊ စတော်ဘယ်ရီလီမွန်နိတ်၊ အုန်းသီး၊ Peanut butter လိုအရသာလေးရယ်၊ Green Tea နဲ့ ပိန်းဥဆိုပြီး အရသာ ၆ မျိုးရှိတဲ့ ဒိန်ချဉ်လေးတွေ ထည့်ရတယ်။
အဲ့အရသာ ၆ မျိုးလုံးက ဒိန်ချဉ်ဆိုပေမယ့် ရေခဲမုန့်နဲ့တွဲစပ်ထားတဲ့အရသာမျိုးလေး။ ချဉ်တာလေးဆို သဘာဝဒိန်ချဉ်နဲ့ စတော်ဘယ်ရီလီမွန်နိတ်လေး ရတယ်။ ကျန်တာလေးတွေကတော့ချိုမွှေးဆိမ့်ဆိမ့်လေး။ တစ်ခု သဘောကျစရာကောင်းတာက ကိုယ်ဘယ်အရသာကြိုက်လဲ သေချာရွေးလို့ရအောင် ဝန်ထမ်းလေးတွေက Sample ခွက်လေးတွေနဲ့ ပေးမြည်းတယ်။ ဒီ Service လေးတော့ သဘောကျစရာ။ တစ်ခုပြောရရင် စက်ကို တခါဖိစာပဲ ထည့်ရုံနဲ့တင် အရသာတမျိုးစီအတွက်အဆင်ပြေပြီနော်။ သူက ဂရမ်အလိုက်ကောက်တာဆိုတော့ လက်လွန်သွားရင် အချိုပွဲကနေ ဗိုက်အဝစားဈေးဖြစ်သွားမှာ ကြောက်ရသေးလေ နော့။
ဒိန်ချဉ်အချိုးအဆကို ကိုယ်ကြိုက်တာ ကြိုက်တဲ့ပမာဏထည့်ပြီးရင် ဒီတခါအသီးလေးတွေ၊ အစေ့၊ ဂျယ်လီလေးတွေ၊ ယိုလေးတွေ၊ ဝေဖာလေးတွေ၊ ကိုယ်ကြိုက်ရာ လိုက်ရာ ရွေးထည့်မယ်။ အားလုံးက ဂရမ်နဲ့ကောက်တာဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့လေးတွေများများထည့်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်။
အဲ့ဒါတွေအားလုံးထည့်ပြီးမှ အပေါ်ကယိုလေးဆမ်း၊ စက်လေးပေါ်တင်၊ ဂရမ်လေးချိန်၊ ပိုက်ဆံလေးထုတ်၊ ခွက်ကလေးကို ဓါတ်လှလှလေးဖမ်း၊ ပြီးရင်တော့ စားလို့ရပါပြီရှင်။
အသီးအနှံလေးတွေနဲ့ ဒိန်ချဉ်မဆန်တဲ့ နို့သားနူးနူးညံ့ညံ့ရေခဲမုန့်မွှေးမွှေးလေးစားရသလိုပါပဲ။ USA Franchise မို့လို့လည်း အရသာရော၊ ရောင်းချမှုပုံစံကပါထူးကဲတယ်။ တစ်ခုပဲ ဈေးလည်းကြီးတယ်။ ကိုယ်တောင် အရသာလေးမျိုး ပါတယ်ဆိုရုံလေးထည့်မိတာ ရှင်းတော့ ၇၀၀၀ နီးပါးကျပါရောလား။ အဲ့ဒါမို့ အဝစားမဟုတ်ရင် သေချာချိန်ပြီး လက်မြန်ခြေမြန်ထည့်ကြပါလို့။
တစ်ခါတလေ ဝင်ငွေကောင်းတုန်း နိုင်ငံခြားအရည်အသွေးအပြည့်ရတဲ့ ဒီလို အရသာလေးတွေလည်း ခံစားဖူးအောင် ခံစားမှ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ဦးမှာမလား? ကိုယ်တွေလို ရေခဲမုန့်ဒိန်ချဉ် ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ ခနခနသွားစားဖြစ်မယ့်ထိကို အရသာလေးသဘောကျမိတယ်။ အခရာပရိသတ်ကြီးလည်း ဘူဖေးဒိန်ချဉ် ချိုချဉ်မွှေးလေး တစ်ခါတခေါက်အဝစားချင်ရင် Myanmar Plaza တတိယထပ် စားသောက်တန်းတွေရဲ့ရှေ့လေးတင် Yoghurt Land ဆိုတဲ့ ဒိန်ချဉ်အဝစားဘူဖေးဆိုင်လေး ရှိတယ်နော်။
ဒိနျခဉျြတို့ကမ်ဘာ Yoghurt Land မှာ ဒိနျခဉျြဘူဖေးအဝစားကွမယျ
လစာလေးကလညျးထုတျပွီးခြိနျ၊ လကျထဲမှာကလညျး ငှယေားလေးမြားရှိနခြေိနျဆို မကျြလုံးက ဘာမွငျမွငျကို နှုတျခမျးကတောငျ့တလာတော့တာမဟုတျပဘေူးလား ဘျောဒါတို့ရေ။ ၂၃,၂၄ ကွပျတညျးခြိနျတှေ ကိုယျ့ကိုကိုယျ မယိုငျမလဲ တောငျ့ခံထားနိုငျခဲ့တဲ့ဆုလာဘျအဖွဈ ခုလိုလစာရပွီးခြိနျလေးတှကေရြငျ မနကျစာဆိုလညျး ကောငျးပလေ့ေးမှ၊ နလေ့ညျစာလေးကလညျး မွိနျလိုကျရမှ၊ စားပွီးခြိနျလညျး ဒီပါးစပျကအငွိမျမနအေခြိုလေးတညျးလိုကျရမှ ခံတှငျးကလညျး ရှငျးတော့တယျဆိုသကိုး။ စားပွီးသောကျပွီးခြိနျလေးတှမြေား ရခေဲမုနျ့လေး ဒိနျခဉျြလေးတှနေဲ့ အခြိုတညျးဖို့ဆိုတာကလညျး လြှာရငျးကိုစိမျ့နစေမေယျ့ အိုငျဒီယာလေးမဟုတျလား?
ဆိုတော့ကာ ဥတုပူပူ နှထေူထူမှာ ပူလောငျ အိုကျစကျအစားမပကျြရစဖေို့ လမျးကွုံဝငျစား၊ Shopping သှားတိုငျး အဆငျပွလေို့ အရသာရှိရှိ စားလို့ရမယျ့ ကိုယျကွှခေဲ့ရာ ဒိနျခဉျြကမ်ဘာလေးကို မနှေးမမွနျ သတငျးပွနျပါးလိုကျပွီနျော ဘျောဘျောတို့။
ဒီဆိုငျလေးက မွနျမာပလာဇာ တတိယထပျအလယျမှာရှိတာ။ ဆိုငျလေးက ခုံလေး ၃,၄ ခုံလောကျနဲ့ ခတ်ေတခနအနားယူရငျး စားသောကျဖို့ ပွငျဆငျထားပေးတဲ့ပုံစံလေးပါ။ သူ့ဆိုငျအပွငျအဆငျလေးရော၊ ခှကျလေးတှေ၊ အသီးအနှံလေးတှအေားလုံး ရောငျစုံခဈြစရာလေး ခငျးကငျြးထားတာမြား ကောငျမလေးတှတေျောတျောသဘောကကြွမှာ အသခြော။
တျောတျောမိုကျတဲ့အခကျြက ဒိနျခဉျြကို ဘူဖေးစားသလိုပဲ။ ကွိုကျသလောကျစား ကသြလောကျရှငျးရတာမြိုးတဲ့။ အဆနျးပဲနျော။ သူလညျး ရနျကုနျမှာ အပွညျ့ဖှငျ့နတေဲ့ Hot Pot ဆိုငျတှကေို အားကလြို့နဲ့တူပါ့။ သူ့နညျးနိသာယနဲ့ ဘယျလိုလေးမြား ဘူဖေးစားရပါ့ဆို???
ပထမဆုံး ရောငျစုံခဈြစရာ ခှကျလှလှလေး ကောကျယူလိုကျမယျ။ ပွီးရငျ ရခေဲမုနျ့စကျလိုမြိုး သဘာဝဒိနျခဉျြ၊ စတျောဘယျရီလီမှနျနိတျ၊ အုနျးသီး၊ Peanut butter လိုအရသာလေးရယျ၊ Green Tea နဲ့ ပိနျးဥဆိုပွီး အရသာ ၆ မြိုးရှိတဲ့ ဒိနျခဉျြလေးတှေ ထညျ့ရတယျ။
အဲ့အရသာ ၆ မြိုးလုံးက ဒိနျခဉျြဆိုပမေယျ့ ရခေဲမုနျ့နဲ့တှဲစပျထားတဲ့အရသာမြိုးလေး။ ခဉျြတာလေးဆို သဘာဝဒိနျခဉျြနဲ့ စတျောဘယျရီလီမှနျနိတျလေး ရတယျ။ ကနျြတာလေးတှကေတော့ခြိုမှေးဆိမျ့ဆိမျ့လေး။ တဈခု သဘောကစြရာကောငျးတာက ကိုယျဘယျအရသာကွိုကျလဲ သခြောရှေးလို့ရအောငျ ဝနျထမျးလေးတှကေ Sample ခှကျလေးတှနေဲ့ ပေးမွညျးတယျ။ ဒီ Service လေးတော့ သဘောကစြရာ။ တဈခုပွောရရငျ စကျကို တခါဖိစာပဲ ထညျ့ရုံနဲ့တငျ အရသာတမြိုးစီအတှကျအဆငျပွပွေီနျော။ သူက ဂရမျအလိုကျကောကျတာဆိုတော့ လကျလှနျသှားရငျ အခြိုပှဲကနေ ဗိုကျအဝစားဈေးဖွဈသှားမှာ ကွောကျရသေးလေ နော့။
ဒိနျခဉျြအခြိုးအဆကို ကိုယျကွိုကျတာ ကွိုကျတဲ့ပမာဏထညျ့ပွီးရငျ ဒီတခါအသီးလေးတှေ၊ အစေ့၊ ဂယျြလီလေးတှေ၊ ယိုလေးတှေ၊ ဝဖောလေးတှေ၊ ကိုယျကွိုကျရာ လိုကျရာ ရှေးထညျ့မယျ။ အားလုံးက ဂရမျနဲ့ကောကျတာဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့လေးတှမြေားမြားထညျ့နိုငျရငျပိုကောငျးတယျ။
အဲ့ဒါတှအေားလုံးထညျ့ပွီးမှ အပျေါကယိုလေးဆမျး၊ စကျလေးပျေါတငျ၊ ဂရမျလေးခြိနျ၊ ပိုကျဆံလေးထုတျ၊ ခှကျကလေးကို ဓါတျလှလှလေးဖမျး၊ ပွီးရငျတော့ စားလို့ရပါပွီရှငျ။
အသီးအနှံလေးတှနေဲ့ ဒိနျခဉျြမဆနျတဲ့ နို့သားနူးနူးညံ့ညံ့ရခေဲမုနျ့မှေးမှေးလေးစားရသလိုပါပဲ။ USA Franchise မို့လို့လညျး အရသာရော၊ ရောငျးခမြှုပုံစံကပါထူးကဲတယျ။ တဈခုပဲ ဈေးလညျးကွီးတယျ။ ကိုယျတောငျ အရသာလေးမြိုး ပါတယျဆိုရုံလေးထညျ့မိတာ ရှငျးတော့ ၇၀၀၀ နီးပါးကပြါရောလား။ အဲ့ဒါမို့ အဝစားမဟုတျရငျ သခြောခြိနျပွီး လကျမွနျခွမွေနျထညျ့ကွပါလို့။
တဈခါတလေ ဝငျငှကေောငျးတုနျး နိုငျငံခွားအရညျအသှေးအပွညျ့ရတဲ့ ဒီလို အရသာလေးတှလေညျး ခံစားဖူးအောငျ ခံစားမှ လူဖွဈရကြိုးနပျဦးမှာမလား? ကိုယျတှလေို ရခေဲမုနျ့ဒိနျခဉျြ ကွိုကျတဲ့သူတှကေတော့ ခနခနသှားစားဖွဈမယျ့ထိကို အရသာလေးသဘောကမြိတယျ။ အခရာပရိသတျကွီးလညျး ဘူဖေးဒိနျခဉျြ ခြိုခဉျြမှေးလေး တဈခါတခေါကျအဝစားခငျြရငျ Myanmar Plaza တတိယထပျ စားသောကျတနျးတှရေဲ့ရှလေ့ေးတငျ Yoghurt Land ဆိုတဲ့ ဒိနျခဉျြအဝစားဘူဖေးဆိုငျလေး ရှိတယျနျော။